MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA BULLWEILER DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Bullweiler Dog iyo Sawiro
Bulldog Mareykan / Rottweiler eeyo isku dhafan oo isku dhafan
Dozer Bullweiler-ka Mareykanka ee jira 1 1/2 sano jir wuxuuna qiyaastii yahay 113 rodol - Waa nin aad u xiiso badan, wuxuu leeyahay shaqsiyad cajiib ah waana wehel layaableh. '
Bullweiler-ka Mareykanka ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Bulldog Mareykan ah iyo Rottweiler . Habka ugu fiican ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah in la eego dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta oo ka mid ah noocyada isku-dhafan. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Dozer Bullweiler-ka Mareykanka ee 1 1/2 sano jir ah oo ku saabsan 113 rodol oo saaran gaariga golf-ka
Dozer eey Mareykan Bullweiler ah oo 6 bilood jir ah
Dozer Bullweiler-ka Mareykanka oo ah eey yar oo fadhiya cawska
Dozer Ereyga Bullweiler-ka ee Mareykanka ee 14 toddobaad jir ah— 'Waxaan ka soo iibsaday eey ka soo iibsatay saaxiibkeed iyada oo ku soo barbaartay Bulldog Mareykan ah (dhadig) oo leh a Rottweiler (lab). Hooyadu waxay lahayd a qashin 10 eey ah . Dabeecaddiisu waa mid cajiib ah oo isagu waa baashaal badan. Aad u adeecsan oo ujeedadiisu tahay inuu ku farxo (sida Rottweiler). Waan ku raaxeysaneynaa eeygeena cusub waa mid aad u xiiso badan.
Dozer Ereyga Bullweiler ee Mareykanku markuu jiro 14 toddobaad
Duke Bullweiler-ka Mareykanka markii uu jiray 3 1/2 sano -Duke waa eey qurux badan, aadna u jecel inuu ka farxiyo, aad u caqli badan oo tababar fudud . Xaqiiqdii isagu waa kan ilaaliyaha gurigeenna iyo dayrka. Wuxuu sameeyaa wareeggiisa subax kasta, isagoo lugeynaya wareegga ardaaga, isagoo eryanaya xayawaan kasta oo ku dhacay inay ka boodaan xayndaabka asturnaanta ama aan dhex guurguuranno, xitaa 'cayrsashada' shimbiraha geedaha ka fog. Wuu la koray haweenkeenna God dibi , Pixie, oo iyagu waa asxaabta ugu fiican . Isagu waa cod badan yahay, haddii aadan sidaas yeelin ka jawaab codsigiisa isla markiiba jilifkiisu wuu sii weynaadaa ilaa aad ka yeeleyso. Wuxuu jecel yahay madaxiisa barkin nooc uun ah, sida lugahaaga, dhinacaaga ama barkin dhab ah. Xaqiiqdii isagu waa nin masayr ah wuxuuna noqon karaa cagajugle dhab ah Pixie, asagoo sheeganaya dhamaan alaabada ay ku ciyaaraan inuu isagu leeyahay. Aad buu u culus yahay dhabta eyga , oo culeyskiisu yahay illaa 115 rodol. Wuu dabooli karaa xoogaa dhul ah markuu ordayo, wuxuuna 'kudhacayaa' hareeraha guriga markuu ciyaarayo. Gurigeennu sidiisa oo kale ma ahaan lahayn! '
Springer spaniel isku darka buluug heeler
Duke Bullweiler-ka Mareykanka markii uu jiray 3 1/2 sano
Duke the American Bullweiler at 3 1/2 sano jir ah oo leh Pixie the God dibi .
'Kani waa sawirka Gracie. Waxaan ka soo badbaadinay Gracie Ururka Bulshada ee Oregon 2007. Dukumiintiyadeedii waxay sheegeen inay ahayd Rott / Shep breed breed. Waxay u ekaatay 'Shepherdy' iyo caruurtayda marwalbana waan isku khilaafsanaa nooca Shepherd ay ahayd. Bishii la soo dhaafay waxaan geeyay dhakhtarka xoolaha si loogu baaro baaritaankeeda joogtada ah waxaana weydiiyay dhakhtarka haddii ay jirto wado ay ku garan karto nooca Adhijirka ay ahayd waan qiyaasayay Aussie , caruurtayduna qiyaastay Jarmal . '
Dhakhtarka xoolaha ayaa ii sheegay in hadda uu jiro Tijaabada DNA eeyadu qaadan karaan, taas oo la mid ah tijaabooyinka DNA-da ee bina-aadamku helaan si ay u go'aamiyaan aabonnimo ama dhaqan ahaan. Waxaan go'aansanay inaan qaadno baaritaanka waana la yaabnay markii natiijooyinka soo noqdeen in Gracie uu ahaa isku darka Rott / American Bulldog. Waa wax la yaab leh sida ay ugu egtahay mid ka mid ah sawirrada isku dhafka noocyadan aad ku leedahay boggaaga. '
Gracie the Rott / American Bulldog mix (Ameerikaanka Bullweiler)
Gracie the Rott / American Bulldog mix (American Bullweiler) sida eey
Soobuuji qaangaarka American Bullweiler (American Bulldog / Rottweiler mix)
'Tani waa Hershey. Iyadu waa caan caan ah Ameerika Bulldog / Rottweiler eyda isku dhafka ah. Iyadu waa mid macaan oo jecel inay siiso dhunkasho (dib ugu noqoshada magaca)! Runtii iyadu waa qurux deggan, oo yar oo yar yar oo yar ah. Waxay jeceshahay inay ciyaarto laakiin waligeed ma faraxsana. Waxaan hayaa afar caruur ah oo ay ku jiraan laba socod barad ah waligoodna kuma dul boodo ama ma garaacdo. Waxay ahayd qof laga soo badbaadiyay hoy ay ka degto magaalo u dhow waanan ku faraxsanahay inaan noqono qoyskeeda weligeed. '
Hershey American Bulldog / Rottweiler mix (American Bullweiler) eey
Liistada eeyaha Bulldog Isku-dhafka ah ee Mareykanka
bulldog isku dhafan oo Mareykan iyo Ingiriis ah
madow iyo cadaan siberian husky leh indho buluug ah
sababta eeyaha ha leeyihiin Sanna pink
pictures of SUNTZU shih dadka waaweyn
sawirrada yorkie maltese mix
buluug heeler basset hound mix